Dooni ay wateen burcad badeed oo ay quusiyeen ciidamada Midowga Yurub+Sawiro – SBC
Dooni ay wateen burcad badeed oo ay quusiyeen ciidamada Midowga Yurub+Sawiro
Taliska ciidamada Midowga Yurub ee hawlgalada la dagaalanka shufto badeeda ka wada xeebaha Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo EU NAVFOR ayaa shaaca ka qaaday inay quusiyeen dooni ay wateen dad lagu tuhmay inay yihiin burcad badeed.
Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska EU NAVFOR oo SBC lagu soo gaarsiiyey fariimaha Internet-ka ayaa lagu sheegay in subaxnimadii 10-ka June markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda eew wadanka Jarmalka oo qayb ka ah hawlgalka EU NAVFOR oo hawlgal ilaalo ah ka wadey xeebaha Soomaaliya uu dajiyey ama quusiyey dooni ay wateen rag looga shakisan yahay burcad badeed oo doonayey inay afduub u geystaan markab.
Warkan ayaa lagu xusey in doonidan la aaminsan yahay inay tiro ka dhawr jeer fulisey weeraro lagu qaadey gaadiid badeed ganacsi.
Dhacdadan oo ka dhacdey xeebaha Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in doonida la dajiyey ay ku xirnaayeen laba doonyaha yar yar dheereeya oo ay jiisadey iyadoo sidoo kale hub uu ka mid yahay qoriga RBG ama baasabuukaha ee garabka laga rido iyo hub kale ay saarnaayeen doonida la quusiyey.
Intii aan doonida la quusin ayaa warku sheegaya in markabka dagaal ee Jarmalku leeyahay FGS Niedersachsen uu ka warhelay in markab ganacsi oo aagaasi gooshayey ay isku dayayeen burcad badeedu inay qabsadaan. Lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi, iyadoo warka lagu xusey in hadii aan hawlgalka burburinta doonidaasi aanu imaan laheyn ay shufto badeedu dusha u fuuli lahaayeen markabka ganacsi.
Yusuf Cali Cabdulle says:
Juun 15, 2011 at 7:33 pm
Saddex(3) Markab oo dagaal ma kula tahay inay meesha
u joogeen Huuri yar oo aan qaadin 30 jawaan? Jawaabtu
waa maya, iyaga ayaa Burcad Badeed ah loo sso xil saaray
ilaanta Maraakibta xaalufinta Badda aan dadka lahayn